(151 okushiwo abanye)
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Amber
I-Lumina iyindawo esesitayeleni yezindlu ngasemanzini e-Smiths Lake enhle. Isakhiwo simayelana nokwamukela imvelo, nokubukwa kwezihlahla ezizungezile kutholakala kuwo wonke amagumbi.
Amapheshana ahlukene asakaza indlu phezu kwamazinga amabili, enamagumbi okulala amathathu namagumbi okugeza amabili engxenyeni engaphezulu. Ukulandela izitebhisi ezimboziwe ezansi emphemeni ovulekile nendawo yokuhlala evulekile lapho uhlaza olucebile luzokuzungeza.
Indlu yonke iklanywe ngobunono ukuze ukwandise ukuthokozela kwakho indawo ezungezile, futhi uqinisekise ukuthi noma yisiphi isikhathi osichitha lapha, sizosetshenziswa kahle. Indawo 'yokuhlala' iyindawo evulekile, enekhishi lesimanje, indawo yokudlela kanye negumbi lokuphumula konke kugeleza ndawonye kahle. Kufakwe ekhishini umshini wokuwasha izitsha, umshini weNespresso (i-pods yekhofi enikeziwe), ihhavini, amapani, i-microwave nayo yonke leyo jazz.
Izinketho zokuzijabulisa zihlanganisa isistimu yomsindo eyakhelwe ngaphakathi (izipikha zasendlini nezangaphandle), i-TV yesikrini esiyisicaba, isidlali se-DVD/Video/Media esinokuqukethwe okuningi kanye nenqwaba yama-DVD abantu abadala nezingane.
Idekhi enkulu evulekile ilungele ukudla, ukufunda nokuzijabulisa (noma kunjalo awekho ama-guardrails, ngakho-ke izingane ezincane kufanele zigadwe ngaso sonke isikhathi). Itafula langaphandle labangu-6 limema i-allfresco yokudlela. Sicela udonsele izihlalo zovemvane ngaphandle ukuze ujabulele ukukhanya kwelanga okudabulile ngencwadi enhle futhi ubuke izinyoni zindiza.
Ephepheni eliphezulu kunamakamelo okulala amathathu, nelikhulu linxapha elinye amabili kwelinye. Igumbi lokulala elikhulu linombhede wendlovukazi, owakhiwe ku-wardrobe, kanye negumbi lokugezela eligcwele elinebhavu elikhulu. Amafasitela agcwele nezindawo zokuphumula kuvumela umoya wechibi ukuthi ugeleze futhi unikeze umbono ongenakuqhathaniswa wechibi phakathi kwezihlahla.
Igumbi lokulala lesibili nelesithathu womabili anemibhede ephindwe kabili futhi akhelwe kuma-wardrobes. Indlu yokugezela ineshawa ebanzi, indlu yangasese kanye newasha ekhabetheni elinomshini wokuwasha.
Ichibi liyisinyathelo esifushane (kodwa esincane) ukusuka endlini, futhi lilungele uhambo lwemvelo. Le ndawo esekupheleni kwechibi ayishoni kakhulu, ngakho ukubhukuda kuhle kakhulu ogwini lolwandle eduze nendawo yesikebhe.
4.82(151 okushiwo abanye)
4.82 · 151 okushiwo abanye
I-Smiths Lake iyidolobhana elihle echibini, eline-vibe ekhululekile futhi eyamukelekayo. Kunomugqa omncane wezitolo emgwaqeni omkhulu, ohlanganisa ibhikawozi, ibhodlela, ibhusha, imakethe encane, kanye nesitolo sokuhamba. Izitolo eziningi namakhefi ambalwa ayatholakala ePacific Palms (cishe imizuzu eyi-6 ukusuka lapho), kanti iForster (30 mins drive) inenxanxathela yezitolo enkulu eneColes, Woolworths njll.
Ichibi liyindawo ezolile yokubhukuda yezingane ezincane enokufinyelela okungcono kakhulu okuseduze kweshede lezikebhe kanye nerempu. Sinama-kayak ambalwa wamukelekile ukuwasebenzisa futhi amahle kakhulu ekuhloleni ichibi. I-Frothy Coffee Cafe kanye neshede yesikebhe nayo iqasha ama-kayak, izikebhe zezimoto nama-catamarans. Amabhishi asebenzisa i-surf e-Seals Rock, i-Cellito Sands, i-Blueys ne-Boomerang wonke ayibangana nje lokuhamba.
I live in Sydney's Northern Beaches and travel into Darlinghurst a couple of times a week for work. I love having a foot in both areas - I couldn't live without the chaos and charisma of the inner city, but being able to relax in a laid back beachside village on the weekends is paradise!
I live in Sydney's Northern Beaches and travel into Darlinghurst a couple of times a week for work. I love having a foot in both areas - I couldn't live without the chaos and chari…
Ngizokunikeza ulwazi mayelana nendlela yokufinyelela okhiye uma usubhukhiwe, futhi abahlanzi bethu bazobe sebengenile endlini ngaphambi kokuba ufike beqinisekisa ukuthi konke sekumi ngomumo. Lokhu kuyindawo eyimfihlo ephelele.
UAmber Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-7667
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$355.